Home » Education Services » Linux Lab
Address: Bldg 4,Room 6,MICT Park
Contact Number: +95-1-652242,652243
Email Address: info.niit@linuxlab.pro
Listed: August 11, 2016 3:42 pm
ခေတ်နှင့်တပြေးညီ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံဧ။် ICT Development ကြီးတွင် မြောက်များစွာသော လူငယ်များသည်လည်း မိမိနိုင့်ကိုက်ညီသော ICT နည်းပညာရပ်များကို လေ့လာလိုက်စားရင်း ကျွမ်းကျင်သော နည်းပညာရှင် တဦးအဖြစ် ရပ်တည်လိုကြပါသည်။
ICT ပညာရှင် တစ်ဦးအနေဖြင့် မဖြစ်မနေသင်ကြားရသော fundamental course များ International Certificate များဖြစ်သော Microsoft, Cisco, Oracle အစရှိတဲ့ Exam များအပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နည်းပညာ လေ့လာလိုက်စားနေကြသော လူငယ်များအတွက် International Diploma Program များသည်လည်း အထူးရေပန်းစားနေပါသည်
NIIT ဆိုသည်မှာ ထိုကဲ့သို.သော Diploma Program များကို အသိအမှတ်ပြုပေးနေသောအဖွဲ.အစည်းများထဲမှIndia နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်တွင် အောင်မြင်လျက်ရှိသော National Institute of IT Technology (NIIT) အကြောင်းမိတ်ဆက်လေးလိုက်ပါသည်။
NIIT အဖွဲ.အစည်းသည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Europe,USA,China,India, Bhutan, South Afria နှင့် Middle East အတွင်းရှိ မြောက်များစွာသော Government နှင့် Private School များဧ။် နည်းပညာ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသော အဖွဲ.အစည်းကြီးတခုဖြစ်ပါသည်. “Top 20 Training Outsourcing Companies” အဖြစ် Training Industry, Inc မှ သတ်မှတ်ထားပြီး Indian ICT Journal Dataquest မှ “Top Training Company” အဖြစ် ရေးသားဖော်ပြထားရုံသာမက World Education Summit 2014 တွင် “Best Vocational Education and Skill Development” အဖြစ်ပါ သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော အဖွဲ.အစည်းကြီးတခုဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဧ။် ပထမဆုံးသော NIIT Center အဖြစ် Linux Lab Myanmar Co.,Ltd မှ ICT နည်းပညာများကို စိတ်ဝင်စားသော လူငယ်များ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် Professional Certificate/Diploma and Higher Diploma သင်တန်းများကို NIIT မှတိုက်ရိုက် သင်ကြားပို.ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်တိုအတွင်း လေ့လာနိုင်သော course များအနေဖြင့်
Working Smart with Microsoft Office 2013 & the Internet
Installing, Configuring, Managing, & troubleshootingaPC (A+)
Protocol & Internet working Standards (N+)
အစရှိသော ဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ကြားနိုင်မည် အဆင့်မြင့် International Certificateများနှင့်International Diploma ဘာသာရပ်များကို လေ့လာရာတွင် များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို.အပြင် Certificate/Diploma and Higher Diploma Professional Course များဖြစ်သော
Certificate Program on Hardware & Networking
Certificate Program on Mobile Apps Development for the Android Platform
MMS Network Engineering
MMS Software Engineering
NIIT သည် နိုင်ငံတကာတွင် အောင်
Ad Reference ID: 54757aab3af722db
Listed by: kyawswarus
Other items listed by kyawswarus
Latest items listed by kyawswarus »
All times are GMT 6.5. The time now is 2:05 am.